Options ကို၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Trader ၏ထင်ဟပ် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်Options ကို၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Trader ၏ထင်ဟပ်
Options ကိုဝယ်ယူဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်တစ်ခုဖော်ထုတ်အချိန်ဘောင်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာတိကျတဲ့ကုန်စည်သို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာရောင်းပိုင်ခွင့်ပေးကြောင်းဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကခေါ်ဆိုခကိုဝယ်ခြင်းငှါလက်ျာသည်နှင့်တစ်ဦးထားသည့်အခြေခံစတော့ရှယ်ယာရောင်းဖို့မှန်သည်သို့မဟုတ် ကုန်စည်။ ထို option များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းသပိတ်စျေးနှုန်းဟုခေါ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ ဘရာဇီး၏အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည် US ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပဲပုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာ။ တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်ထင်ကြေးပဲပုပ်ပဲများ၏စျေးနှုန်းဒေါ်လာကိုမှန်ကန်ဘရာဇီးငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်စျေးပေါဖြစ်လာသည်, နှင့်အသုံးပြုသူများသည်ပထမဦးဆုံးဝယ်ခြင်းငှါသွားကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်တက်သွားကြောင်းထင်လျှင် US ပဲပိစပ်ပဲ, ပြီးတော့သူကပဲပုပ် bean ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာယခုဒီဇင်ဘာလနှင့်မေလစာချုပ် bushel နှုန်း $ 10.60 များအတွက်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်နေစဉ်ဇန္နဝါရီလပဲပုပ် bean ကိုအနာဂတ်စာချုပ်များ၏စျေးနှုန်း $ 10.80 တစ် bushel ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက $ 11.00 ၏သပိတ်စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိတွင် bushel နှုန်း .40 ဆင့်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူမခေါ်နိုင်ပါစေ။ အဆိုပါစာချုပ် 5000 bushels အဘို့ဖြစ်၏, .40 ဆင့်၏ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်စာချုပ်နှုန်း $ 2000 ညီမျှ။ ဒါကထင်ကြေးဧပြီလနှောင်းပိုင်းအတွင်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိပဲပုပ်ပဲ 1 စာချုပ် (5000 bushels) ကိုခေါ်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
အခုတော့အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လျှင်ကစားရ။ အဘယ်အရာကိုမှန်းဆမှန်တယ်ဆိုရငျကော ဒါဟာစပါးရိတ်ရာကာလ delay လုပ်ခြင်း, ဘရာဇီးအတွက်ကျယ်ပြန့်ရွာစေ။ ဤသည်အတင်းအဓမ္မပိုပြီးတင်ပို့ပဲပုပ်အမေရိကန်ဝယ်လိုအားနှင့်, US စျေးနှုန်းတက်သွားလေ၏။ ထိုအခါဆိပ်ကမ်းလုပ်သားများဘရာဇီးအတွက်သပိတ်ပေါ် သွား. လှေ loaded လို့မရပါ။ သူတို့ပဲပုပ်ပဲရောင်းဖို့ငြင်းဆန်နိုင်အောင်ဘရာဇီးလယ်သမားများအနိမ့်သောစျေးနှုန်းမကြိုက်ဘူး။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များ၏စျေးနှုန်းအတင်းအကျပ် US ပဲပိစပ်ပဲတက်တချို့ပို။ သူတို့ bushel နှုန်း $ 14.00 များ၏အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီသောအခါ, ထင်ကြေးသူ၏အမြတ်အစွန်းယူဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူ $ 40 သပိတ်စျေးနှုန်း bushel နှုန်း .11.00 ဆင့်အဘို့ဝယ်သော option ကိုယခု $ 3.00 တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ စာချုပ်ဆိုတာသတိရပါအဆိုပါထင်ကြေး $ 5000 အနုတ်ကတော့ $ 3.00 မူရင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုဖန်ဆင်းဒါများပြားကြိမ် $ 15,000 ဖြစ်သော 2,000 bushels ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ကြောင်းကုန်သွယ်မှု၏ငါ၏အမျိုး, လေးလအတွက် $ 13,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦး $ 2000 ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိုဘယ်လိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်သနည်း? အဖြေ, သင်တန်း, အလွန်မကြာခဏတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကလွယ်ကူ, လူတိုင်းအနာဂတ်ဒါမှမဟုတ်ရွေးချယ်စရာ၏စျေးနှုန်းတက်ပြေးသူကလုပ်နေလိမ့်မယ်လို့ခဲ့ကြသည်လျှင်။ အဆိုပါပဲပုပ်ဈေးကွက်မပြောင်းလဲရှိနေဆဲသို့မဟုတ်ဆင်းသွားပြီးမှ, ထို $ 2000 option ကိုတဖြည်းဖြည်းဘာမျှမသွားကြအရည်ကျိုကြလိမ့်မယ်။ ရံဖန်ရံခါစျေးကွက်ကြီးမားတဲ့အချိန်ဆုရှင်၏အိပ်မက်အားဖြင့်သင်တို့ဒါကတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့သင့်မျက်နှာသာအတွက်ကုန်သွယ်မှု, ဒါပေမယ့် 80 ရွေးချယ်စရာ% 85 အကြောင်းအချည်းနှီးကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
option ကိုဝယ်လက်အခြားဘက်မှာအနိုင်ရရှိသူအချိန် 85% ကိုဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်? ကောင်းပြီ, တိုင်းဝယ်ဘို့ရောင်းသူတစ်ဦးရှိပါတယ်။ တစ်ခု option ကိုရောင်းဖို့, ဖလှယ်မှုနှင့်အရှင်းလင်းခြင်းအိမ်များသင့်ရဲ့စွန့်စားမှုသီအိုရီန့်အသတ်သောကွောငျ့သငျသညျခေါ်ဆိုမှုများရောင်းချသူများမှာလျှင်သင်အများကြီးပိုပြီးပိုက်ဆံရှိသည်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ option ကိုရောင်းချသူသို့မဟုတ်စာရေးဆရာအာမခံပေါ်လစီသည်ပိုင်ရှင်တင်သွင်းသည့်အခါတောင်းဆိုချက်များဆပ်ဖို့မလိုအပ်သူတစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါ option ကိုဝယ်ယူထားတဲ့အာမခံပေါ်လစီဝယ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အများစုမှာ option ကိုစာရေးဆရာများအတွေ့အကြုံအနှစ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့အရောင်းအပေါငျးတို့သငွေရှာမဆိုလိုပါ, သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ရှိသူတို့ရဲ့ပွင့်လင်းရာထူးစောင့်ကြည့်နေ့တိုင်းဖြစ်ကြသည်။ သင်ရောင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာသို့မဟုတ်ကုန်စည်သွားသည်ကိုဘယ်လိုမြင့်မားသောအဘယ်သူမျှမန့်သတ်ချက်ရှိချိန် မှစ. သင်ကန့်အသတ်အန္တရာယ်ရှိသည့်သပိတ်စျေးနှုန်းမှာ shorting နေကြသည်ကတည်းကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရောင်းအလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။